नयाँ वर्षको पहिलो व्यापार दिनमा नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ । सोमवार नेप्से परिसूचक ४ दशमलव ७० अंकले बढेको छ । परिसूचक बढेपनि कारोबार रकम भने घटेको छ । उतारचढावमा रहेको परिसूचक अन्त्यमा शून्य दशमलव ४० प्रतिशतले बढेको हो । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक १ हजार १ सय ८८ दशमलव ७१ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
नेको इन्स्योरेन्सको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ५ सय २२ मा रू. २ करोड ७५ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । साथै, कुमारी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, एनएमबि बैंक, प्रभु बैंक, साना किसान विकास बैंक रू. १ करोडभन्दा बढी रकमको शेयर कारोबार भएको छ । अस